लेखाइमा सुन्दर अक्षरको महत्व - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मानिसले अन्तरमनको ज्ञानलाई जनमानस सम्म पुर्याउने दुई तरिका छन । एउटा बोली अथवा आवाजको माध्यमबाट र अर्को लेखाइको माध्यमबाट । मानिसको बोली वा आवाजमा जति स्पष्टता दिन सक्यो सुन्नेले उति सहज गरि सुन्ने तथा बुझ्ने गर्दछ । त्यस्तै लेखाइ मा जति सुन्दरता दिन सक्यो पाठकले उति सहजै बुझ्ने गर्दछ । सुन्दर तथा आकर्षित अक्षर लेखन पनि एउटा कला वा सीप हो । राम्रो अक्षर लेख्ने कला पटक पटकको अभ्यासले सुधारिन्छ । बाल्यकालमै यसमा ध्यान पुर्याउन सके भबिस्यमा यसको निखरता तिर जान सकिन्छ ।
यहाँ सुन्दरता शब्दलाई लेख भित्रको लेपन भन्दा पनि अक्षरहरुको बनावटमा महत्व दिन खोजिएको हो । आकर्षक वा राम्रो अक्षरको प्रभावले पाठकहरु माझ लेखको गहनता भित्रको सुगन्धतामा शृङ्गारता झल्किने गर्छ । राम्रो अक्षर भनेको अक्षरको बनोटलाई कलात्मक रूपमा आकर्षक तथा सुन्दर बनाउनु हो । अक्षर सफा, स्पष्ट ,सुन्दर, चिटिक्क परेको हुनु पर्दछ । तर, हामीले अक्षर राम्रो बनाउने नाउँमा अक्षरको मूल मर्मलाई ठेस पुर्याउनु हुदैन । अक्षर अक्षर मिलेर बनेका शब्द एकैनासका लहरै मिलेर बसेको हुनु नै यसको सुन्दरता हो ।
मानिसद्वारा लेखिएका योग्य र उचित प्रकारका शब्दहरुले तव मात्रै न्याय पाउछन् जब ति अक्षरहरु सुन्दर र आकर्षण युक्त रुपमा लेखिन्छ । लेखकले अक्षर र शब्दको उचित संयोजन मार्फत लेखिएको कुरालाई न्याय दिलाउन सक्नु पर्दछ । कलमको सहायताले कापीको पानामा लेखिने अक्षरहरुको बनावटलाई अक्षरहरुको सुन्दरताको रुपमा हेरिन्छ । राम्रो अक्षरले पाठकलाई आकर्षण गर्दछ । हेर्दै राम्रो लाग्ने अक्षरहरुले भरिएको न्यायोचित लेखाइ दोर्याइ तेर्साइ पढौ पढौ लाग्छ ।
परापुर्वक काल देखि नै राम्रा अक्षर लेखनको महत्वलाई बिशेष रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । इतिहासविदहरुको भनाइ अनुसार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली देखिनै राम्रो अक्षर लेखे बापत गुरुले शिष्यलाई पुरस्कार दिने प्रचलन थियो । राम्रा तथा आकर्षक अक्षरहरुको प्रभाव हरेक लेखनमा रहन्छ । विद्यालय देखि लोक सेवा आयोगका लिखित परिक्षामा सुन्दर अक्षर भएका विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने प्राप्ताङ्कमा यसको महत्व धेरै हुने गर्दछ । राम्रो तथा आकर्षक अक्षर लेखाइले कपि परिक्षणमा परिक्षणकर्ताको दिमागमा पार्ने सकारात्मक प्रभावले परिक्षार्थीले नसोचेको परिणाम आउन सक्छ ।
बिज्ञानको विकास संगै विकास भएका ल्यापटप, कम्प्युटर, टाइपराइटर जस्ता आविष्कारले हस्तलेखनलाई केहि हद सम्म प्रतिस्थापन गरेपनि राम्रा अक्षरको मुलभुत महत्व आज पनि उतिकै रहेको पाइन्छ । हामी आफैले अनुभव गरेकै कुरा हो आधुनिकता संगै भित्रिएको कम्प्युटर, ल्यापटप प्रयोगको कारण हाम्रो अक्षरको बर्तमान अवस्था खस्कदो छ ।
अनि सहजै अनुमान गर्न सक्छौ भोलि हाम्रा सन्ततिहरुको अक्षर लेखनको अवस्था कस्तो होला ? कलमले कापीका पानामा लेख्न हराउदै गएको बानीले सुन्दर अक्षर लेखन कला नै हराउन थालेको छ ।
आज विविध कारणले अभिभावकहरू बेफुर्सदिला भएका छन् । त्यसकारण आफ्ना छोराछोरीलाई पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन् । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई केवल विद्यालयको औपचारिक शिक्षा दिलाईरहेका छन् । के विद्यालय मात्रैको प्रयासले हाम्रो नानीबाबुको अक्षरले सुन्दरता हासिल गर्न सक्छ त ? अवस्य सक्दैन । अभिभावकलाई आफ्ना नानिबाबुले कस्तो लेख्यो ? कस्तो पढ्दै छ ? भनी हेर्ने फुर्सद सम्म छैन । कति विद्यालयहरुले बालबालिकाहरुको अक्षरको स्तरीयतामा खास चासो नराख्ने कारणले उनिहरुको अक्षर कुरुप हुने गरेको छ ।
सिक्ने र सुधारिन सक्ने उचित समयमा बालबालिकालाई सिकाउन, सुधार गराउन सकिएन भने समय बितेपछि सिकाउन गार्हो हुन सक्छ । भनिन्छ ‘ूलुहा तातेको बेलामा मात्र भनेको आकारमा डाल्न सकिन्छू । जसरी हिजो अक्षरको सुन्दरतालाइ विद्यालयहरुले महत्व दिइ त्यस खालको सिकाइ सिकाइने गरिन्थ्यो आज राम्रो अक्षर लेखनलाई धेरै विद्यालयहरुले महत्व दिने गरेको पाइदैन ।
आज बालबालिकाको सुन्दर अक्षर लेखनमा टेवा पुर्याउने उदेश्यले केहि सामाजिक संस्थाहरुको स्थापना भएका छन । काठमाडौंकै मध्य बानेश्वरमा विगत पाँच बर्ष अघि देखी संचालनमा आएको ह्यप्पी किड्स फाउन्डेसनले विद्यालय स्तरका बालबालिकाहरुलाइ राम्रा अक्षर लेखनका तालिम, सेमिनार, प्रेरणादायी कार्यक्रम संचालन गरेको पाइन्छ ।
त्यस संस्थाका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर श्री अभिशेक घिमिरेको भनाइ अनुसार बालबालिकालाई विद्यालयमै गएर राम्रा अक्षर लेखनका विभिन्न तालिम, प्रेरणादायक कार्यक्रमको अलवा विभिन्न प्रकारका सीप सिकाइन्छ । त्यस फाउन्डेसनको पहलकदमीमा दुई नेपाली विद्यार्थीले अन्तराष्ट्रिय स्तरको राम्रो अक्षर लेखनको प्रतियोगिता सम्म जितेका छन ।
त्यस संस्थाले राजधानी लगायत मोसफलको जिल्लाहरुमा सुन्दर अक्षर लेखनको तालिम एवं ससाना बालबालिका केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइन्छ जुन बाल सिकाइ केन्द्रित हुने गर्दछ ।विजयी प्रतियोगीहरु राम्रो अक्षर लेखनको विश्व ब्यापी प्रतियोगितामा नेपाली विद्यार्थीलाई सामेल गराउनुले आफुमा प्रेरणा मिलेको अनुभव सुनाउछ्न ।
यस संस्थाले आफ्ना पश्चिस भन्दा बढी तालिम प्राप्त ब्यक्तिहरुलाई राम्रो अक्षर लेखन कलालाई सघाउ पुर्याउन बिभिन्न विद्यालयमा खटाउनु प्रसंषा गर्न योग्य कुरा भए पनि यसरी अर्कैले गरिदिएर मात्र हाम्रो बालबच्चाको राम्रो अक्षर लेखाइमा सुधार होला त ? अवस्य नहोला । ब्यक्ति, समुह, सामाजिक संघ(संस्थाहरुको खासै यसमा चासो नहुनुले भोलि हस्तलेखनको सुन्दरता नै गुम्ने खतरा बढदै गएको छ ।
यसर्थ यती मात्रैले राम्रो अक्षर लेखनको सीपलाई जगेर्ना गर्न असम्भब छ । हामीसबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो अक्षर लेखनको विषयमा चासो देखाउनु आजको आवश्कता हो । हस्तलेखनको महत्वलाई बेलैमा ध्यान पुर्याउन नसके भोलि हाम्रा कलिला नानीबाबुहरुमा लेखन कला प्रतिको सीप हराउदै जान्छ । हातको लेखनबाट विकास भएका हस्तकला, चित्रकला जस्ता विषय पनि ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।